लस एन्जलस । आइतबार (अप्रिल २५) हुने ओस्करको प्रत्यक्ष प्रसारण (समारोह) सहभागी हुनेहरुले फेस मास्क लगाउनु नपर्ने एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सेसले घोषणा गरेको छ । सोमबार भएको जुम मिटिङमा एकेडेमीले यस्तो बताएको हो ।
लस एन्जलसको युनियन स्टेसनमा आयोजना हुन लागेको शोमा क्यामेरा रोल हुँदा पाहुनाहरुले मास्क लगाउन जरुरी नभएको एकेडेमीका कर्मचारीहरुले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, क्यामेरा रोल नहुँदा भने मास्क लगाउनुपर्नेछ । जस्तै, विज्ञापन आइरहँदा भने मास्क लगाउनुपर्नेछ ।
स्टुडियोमा मात्रै १७० अर्थात् सीमित पाहुनाहरुबीच ओस्कर सञ्चालन हुनेछ । भेराइटी डटकमका अनुसार शोमा सहभागी हुने पाहुनाहरु र नोमिनेसनमा परेका कलाकारहरु आउने–जाने भइरहनेछ ।
हलमा प्रवेश गर्नुपूर्व प्रत्येको शारीरिक तापक्रम जाँच गरिनेछ भने सहभागी हुनेले कम्तीमा तीनपटक कोभिड परिक्षण गरेको हुनुपर्नेछ । रेड कार्पेटमा पनि केवल तीनजना फोटोग्राफरहरु मात्रै हुनेछन् भने मिडियाहरु पनि सेलेक्टेड मात्रै हुनेछन् ।
यसका साथै अन्तर्वार्तामा पत्रकार र कलाकारबीच सात फिटको दूरी राखिने एकेडेमीले जानकारी दिएको छ । विजेताहरुले भर्चुअल अन्तर्वार्ता पनि दिन पाउनेछन् ।
नायकको अवधारणामाथि नै ‘बलात्कार’ गर्ने नेपाली चलचित्र
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रमा कस्ता नायक हुन्छन् ? केही दिनअघि सम्पन्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)मा नायिका करिष्मा मानन्धरले भनेजस्तो... २३ मिनेट पहिले
भैरव अर्यालसँग जम्काभेट !
उमेश रेग्मी एक साताको छुट्टी लिएर पृथ्वी भ्रमणमा आएका रहेछन्, भैरव । मसँग जम्काभेट भयो । त्यही भेटमा मैले मौका छोपीहालेँ,... ५५ मिनेट पहिले
पृथ्वीलाई सम्बोधन पर्ख, एकैछिन पर्ख मेरो पृथ्वी ! म तिमीलाई हाम्रो समयको खुंखार हत्यारासँग चिनजान गराउँछु, ग्रन्थले उल्लेख गरेका... १ घण्टा पहिले
मनु ब्राजाकी मध्याह्न छ । सुँगुरहरू भुइँ खन्दै छन् । दशआठजना केटाकेटीहरू यताउति छरिएका छन् मानौँ, यी घर सजाउनका लागि होइनन् । फोहोरमैलाका... १ घण्टा पहिले